မေး : တက်လမ်း အွန်လိုင်းပညာရေးဝန်ဆောင်မှု ဆိုတာ ဘာလဲ ?
ဖြေ : တက်လမ်း အွန်လိုင်းပညာရေးဝန်ဆောင်မှု ဆိုတာ ပညာကို ချစ်ခင်လိုလားပြီး ဘဝတိုးတက်မှု ရှာဖွေချင်သူ လူငယ်တိုင်းအတွက် အကျိုးကြီးမားတဲ့ သင်ယူလေ့လာစရာ ပညာရပ် ဘာသာရပ်တွေကို အင်တာနက်ရှိရုံနဲ့ အချိန်မရွေးနေရာမရွေး အွန်လိုင်းပေါ်မှာ တက်ရောက်သင်ယူနိုင်တဲ့ ပညာရေးဝန်ဆောင်မှု ဖြစ်ပါတယ်။
မေး : တက်လမ်း အွန်လိုင်းပညာရေးဝန်ဆောင်မှု ကို ရယူနိုင်ဖို့ ဘာတွေလိုအပ်လဲ ?
ဖြေ : ပထမဦးစွာ တက်လမ်း အွန်လိုင်းပညာရေးဝန်ဆောင်မှု ကို ရယူဖို့ MPT ဖုန်းနံပါတ်ဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုကို ရယူပြီး အင်တာနက်ရှိရုံနဲ့ မိုဘိုင်းဖုန်းကနေ ဖြစ်စေ ကွန်ပျူတာကနေဖြစ်စေ တက်လမ်းပညာရေးဝက်ဘ်ဆိုဒ် (http://tatlanapp.com) မှာ ဝင်ရောက်ကာ သင်ယူလေ့လာနိုင်သလို တက်လမ်းမိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းကို google playstore မှ ဒေါင်းလုတ်ရယူပြီး မိမိဖုန်းထဲကနေ သင်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
မေး : တက်လမ်း ကနေ ဘာတွေသင်ယူလေ့လာနိုင်မှာလဲ?
ဖြေ : တက်လမ်းပညာရေးဝက်ဘ်ဆိုဒ်ကနေဖြစ်စေ တက်လမ်းမိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းကနေဖြစ်စေ သင်ယူလေ့လာစရာ ဘာသာရပ်ပေါင်းစုံကို သင်ယူလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အထွေထွေ အင်္ဂလိပ်၊ စီးပွားရေးသုံးအင်္ဂလိပ်၊ ဈေးကွက်စီမံခန့်ခွဲမှု၊ အိုင်တီ၊ ကွန်ပျူတာလေ့လာနည်း၊ ပန်းချီ၊ ဂီတ စသည့် ကဏ္ဍအစုံအလင်ကို မိမိတို့နှစ်သက်ရာ ဘာသာရပ်အလိုက် ရွေးချယ်သင်ယူလေ့လာနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မေး : တက်လမ်း အွန်လိုင်းပညာရေးဝန်ဆောင်မှု ကို မည်သည့်နေရာမှ ရယူနိုင်ပါသလဲ?
ဖြေ : တက်လမ်း အွန်လိုင်းပညာရေးဝန်ဆောင်မှုကို MPT ဖုန်းနံပါတ်ဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုရယူကာ တက်လမ်းပညာရေးဝက်ဘ်ဆိုဒ် (http://tatlanapp.com) တွင် ဝင်ရောက်သင်ယူနိုင်မှာဖြစ်သလို လိုတရ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ဖြစ်တဲ့ (http://tl.lotayamm.com/) နှင့် google playstore ကနေလည်း တက်လမ်းမိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းကို ဒေါင်းလုတ်ရယူကာ မိမိဖုန်းကနေ သင်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
မေး : တက်လမ်း အွန်လိုင်းပညာရေးဝန်ဆောင်မှုကို ရယူချင်ပါက ဘယ်လိုပြုလုပ်ရမလဲ?
ဖြေ : တက်လမ်း အွန်လိုင်းပညာရေးဝန်ဆောင်မှုကို ရယူဖို့အတွက် MPT ဖုန်းနံပါတ်ဖြင့် 8228 သို့ DD သို့မဟုတ် ON ဟု စာတိုပေးပို့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဝန်ဆောင်မှုရယူပြီးပါက တက်လမ်းပညာရေးဝက်ဘ်ဆိုဒ် (http://tatlanapp.com) ဝင်ရောက်သင်ယူနိုင်မှာဖြစ်သလို တက်လမ်းမိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းကို Google Playstore မှာ ဒေါင်းလုတ်ရယူပြီး မိမိတို့ဖုန်းမှာ အသုံးပြုသင်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ လိုတရ ဝက်ဘ်ဆိုဒ် http://tl.lotayamm.com/ ကနေတစ်ဆင့်လည်း တက်လမ်းပညာရေးဝန်ဆောင်မှုကို ရယူသင်ကြားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
မေး : တက်လမ်း ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုမှာ ဝန်ဆောင်ခ ဘယ်လောက်ပေးရပါသလဲ။
ဖြေ : ဝန်ဆောင်ခ အတွက် ၁ ရက်ကို ၁၀၅ ကျပ် သာ ပေးဆောင်ရမှာဖြစ်ပြီး သင်ခန်းစာတွေကို အကန့်သတ်မရှိ လေ့လာသင်ယူနိုင်ပါတယ်။
ဖြေ : တက်လမ်း အွန်လိုင်းပညာရေးဝန်ဆောင်မှု မှ ဝန်ဆောင်မှုများ ရပ်တန့်လိုပါက 8228 သို့ “OFF” ဟု စာတို ပေးပို့ပြီး ဝန်ဆောင်မှုကို ရပ်တန့်နိုင်ပါတယ်။
မေး : တက်လမ်း အွန်လိုင်းပညာရေးဝန်ဆောင်မှု မှာ ဝန်ဆောင်မှု ရပ်တန့်ပြီးမှ ဝန်ဆောင်မှု ပြန်လည်ရယူလိုလျှင် ဘယ်လို လုပ်ရမှာလဲ?
ဖြေ : ဝန်ဆောင်မှု ပြန်လည်ရယူလိုပါက 8228 သို့ DD သို့မဟုတ် ON ဟုစာတို ပေးပို့ကာ ပြန်လည် ရယူ နိုင်ပါသည်။
မေး : တက်လမ်း အွန်လိုင်းပညာရေးဝန်ဆောင်မှု နဲ့ ပါတ်သတ်လို့ သိချင်တာရှိရင် ဘယ်လိုစုံစမ်းရမလဲ ?
ဖြေ : MPT ဖုန်းနံပါတ်ဖြင့် 8228 သို့ HELP ဟု စာတို ပေးပို့ကာ အကူအညီ ရယူ နိုင်ပါသည်။
မေး : တက်လမ်း အွန်လိုင်းပညာရေးဝန်ဆောင်မှု မှာ ဘယ်လို အကြောင်းအရာတွေ ပါဝင်မှာလဲ ?
ဖြေ :တက်လမ်း ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုက ပညာရေးသင်ခန်းစာများကို တစ်နေရာတည်းတွင် တစ်စုတစ်ဝေးတည်း လေ့လာသင်ယူခွင့်ရမယ့် ပညာရေးဝန်ဆောင်မှု တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ တက်လမ်းပညာရေးဝန်ဆောင်မှုက ပညာ လိုလားသူတွေအတွက် အထွေထွေ အင်္ဂလိပ်၊ စီးပွားရေးသုံး အင်္ဂလိပ်၊ ဈေးကွက်စီးပွားရေး၊ စီးပွားရေး စီမံခန့်ခွဲမှုဘာသာရပ်၊ ကိုရီးယားဘာသာ၊ ပန်းချီ၊ ဂီတ စသည့် ပညာရပ်မျိုးစုံကို တစ်နေရာတည်းမှာ အကန့်အသတ်မရှိ စုံစုံလင်လင် လေ့လာနိုင်မည့် အကောင်းဆုံးသော ပညာရေး အွန်လိုင်းပညာရေးဝန်ဆောင်မှု တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ထို့ပြင် သင်တန်းကျောင်းတည်နေရာများ၊ ဆရာ၊ ဆရာမများ၏ အချက်အလက်များကို ရှာဖွေသိရှိနိုင်စေမယ့် ဝန်ဆောင်မှုလည်း ပါဝင်ပါတယ်။
မေး : တက်လမ်း အွန်လိုင်းပညာရေးဝန်ဆောင်မှု မှာ ဘယ်ဆရာတွေသင်ကြားပေးမှာလဲ ?
ဖြေ : ပညာရေးနယ်ပယ်မှာ အောင်မြင်ကျော်ကြားတဲ့ ဘာသာရပ်ဆရာများက သင်ကြားပို့ချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
မေး : တက်လမ်း အွန်လိုင်းပညာရေးဝန်ဆောင်မှု မှ သင်ကြားရေး ဗီဒီယိုတွေကို တစ်ခြားဘယ်နေရာမှာ ဘယ်လိုလေ့လာလို့ ရနိုင်သေးလဲ ?
ဖြေ : တက်လမ်းအွန်လိုင်း ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုမှ သင်ကြားရေးဗီဒီယိုတွေကို တက်လမ်း ပညာရေးဝက်ဆိုဒ် (http://tatlanapp.com) မှာ ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်သလို တက်လမ်းမိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းကို Google Playstore ကနေ ဒေါင်းလုတ်ရယူပြီး မိမိရဲ့ မိုဘိုင်းဖုန်းထဲမှာ သင်ယူလေ့လာနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဖြေ : Internet Connection လိုအပ်ပါတယ်။
ဖြေ : တက်လမ်းမှာ ဗွီဒီယိုသင်ခန်းစာတွေက ကြည့်ရှုသင်ယူသူ အကုန်အကျသက်သာအောင် စီစဉ်ပေးထားပြီး ကြည့်ရှုသင်ယူသူက တစ်မိနစ်ကို4MB နှုန်းပဲ ကျသင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။
မေး : တက်လမ်း အွန်လိုင်းပညာရေးဝန်ဆောင်မှု မှာ သင်ကြားရေးဗီဒီယိုတွေကနေ့စဉ် အသစ်တင်ပေးမှာလား၊ ?
ဖြေ : သင်ကြားရေး ဗီဒီယိုများကို နေ့စဉ်နေ့တိုင်း အသစ်တင်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ကြားရေးဗီဒီယို စုစုပေါင်း အနည်းဆုံး ၅ ပုဒ်မှ ၈ ပုဒ် အထိ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း အသစ် တင်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မေး : တက်လမ်း အွန်လိုင်းပညာရေးဝန်ဆောင်မှု က ရနိုင်တဲ့ သင်ကြားရေးဘာသာရပ်တွေထဲမှာ မိမိသင်ယူချင်တဲ့ ဘာသာရပ်ကို ရွေးချယ်ပြီး သင်ယူလို့ ရပါသလား ?
ဖြေ : တက်လမ်း သင်ကြားရေးဘာသာရပ်တွေထဲမှာ မိမိသင်ယူလေ့လာချင်တဲ့ ဘာသာရပ်ကို မိမိစိတ်ကြိုက် လေ့လာသင်ယူနိုင်ပါတယ်။
မေး : တက်လမ်း အွန်လိုင်းပညာရေးဝန်ဆောင်မှုမှာ သင်တန်းတွေတက်လို့ရနိုင်ပါသလား ?
ဖြေ : တက်လမ်း အွန်လိုင်းပညာရေးဝန်ဆောင်မှုမှာ လောလောဆယ် သင်တန်းတွေ တက်လို့မရနိုင်သေးပါဘူး နောက်ပိုင်းတွေ အွန်လိုင်း သင်တန်းတွေဖွင့်လှစ်နိုင်အောင် ကြိုးစားသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မေး : တက်လမ်း အွန်လိုင်းပညာရေးဝန်ဆောင်မှုကို အခြား ဆင်းမ်ကတ်တွေနဲ့ရော ရယူလို့ရလား ?
ဖြေ : တက်လမ်း အွန်လိုင်း ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုကို MPT ဆင်းမ်ကတ်ဖြင့်သာ ရယူနိုင်မှာ ဖြစ်ပြီး အခြား မည်သည့် ဆင်းမ်ကတ် နဲ့မှ ရယူနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
မေး : ကျွန်တော်တို့က မြန်မာနိုင်ငံမှာ မဟုတ်ပါဘူး Oversea ကနေရော သင်ယူလို့ရပါသလား။ ဘယ်လိုသင်ယူလို့ရပါသလဲ?
ဖြေ : မြန်မာနိုင်ငံပြင်ပက ဝန်ဆောင်မှုကို ရယူပြီး သင်ယူချင်သူတွေအတွက်လည်း မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့ MPT ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ ဝန်ဆောင်မှုရယူပြီး မြန်မာနိုင်ငံပြင်ပ ဘယ်နေရာက မဆို တက်လမ်းပညာရေးဝက်ဘ်ဆိုဒ်ထဲကို ဝင်ရောက် လေ့လာ သင်ယူနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မေး : မည်သည့် device နှင့် မဆို လေ့လာသင်ယူလို့ ရပါသလား ?
ဖြေ : MPT ဆင်းမ်ကတ်ဖြင့် ဝန်ဆောင်မှု ရယူပြီးပါက မည်သည့် မိုဘိုင်းဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ၊ လက်ပ်တော့၊ ကွန်ပျူတာနဲ့ ဖြစ်စေ အင်တာနက် browser မှတစ်ဆင့် တက်လမ်းပညာရေးဝက်ဘ်ဆိုဒ် (http://tatlanapp.com) မှာ ဝင်ရောက်သင်ယူလေ့လာနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မေး : တက်လမ်း ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုကနေ သင်ကြားပေးနေတဲ့ သင်ခန်းစာ ဗီဒီယို များသည် English ဘာသာနဲ့လား မြန်မာဘာသာ နဲ့လား ?
ဖြေ : သင်ခန်းစာ ဗီဒီယို များကို ဆရာများက မြန်မာဘာသာဖြင့် သင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပြီး လိုအပ်သည့် power point စာမျက်နှာများကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
မေး : ဝန်ဆောင်မှု ရယူပုံအသေးစိတ်လေး သိချင်ပါတယ် ?
ဖြေ : MPT ဖုန်းနံပါတ်ဖြင့် 8228 သို့ DD သို့မဟုတ် ON ဟု ပေးပို့ပြီး ဝန်ဆောင်မှုရယူပါ၊ လျှိ့ဝှက်ကုတ် ပြန်လည် ပေးပို့လာပါက ၎င်း လျှို့ဝှက်ကုတ်ကို ရိုက်နှိပ်ပြီး တက်လမ်း ပညာရေးဝက်ဘ်ဆိုဒ် (http://tatlanapp.com) မှာ သင်ခန်းစာများကို ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ လိုတရ ဝက်ဘ်ဆိုဒ် http://tl.lotayamm.com/ ကနေတစ်ဆင့်လည်း တက်လမ်းဝန်ဆောင်မှုကို ရယူသင်ကြားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တက်လမ်းအက်ပလီကေးရှင်းကိုလည်း Google Playstore ကနေ ဒေါင်းလုတ်ရယူပြီး မည်သည့်ဖုန်းနှင့်မဆို ဝန်ဆောင်မှု ရယူသင်ကြားနိုင်ပါတယ်။ ဝန်ဆောင်မှု ရယူပုံအသေးစိတ်ကို ဓါတ်ပုံ ၊ ဗီဒီယို တို့ဖြင့်လည်း တက်လမ်း အွန်လိုင်းပညာရေးဝက်ဘ်ဆိုဒ် တွင် ထည့်သွင်း ဖော်ပြ ပေးထားမှာ ဖြစ်ပြီး တက်လမ်း Facebook Page (https://www.facebook.com/TatLanEdu/) မှာလဲ အပါတ်စဉ် ဖော်ပြပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ပြင် တက်လမ်း၏ Customer Service ဖုန်းနံပါတ် (၀၉ ၈၉၈ ၈၇ ၆၇ ၈၇, ၀၉ ၈၉၈ ၈၇ ၆၇ ၉၇ , ၁၀၆) သို့လည်း ဖုန်းခေါ်ဆိုပြီး ဆက်သွယ် မေးမြန်း နိုင်ပါတယ်။
မေး : တက်လမ်း အွန်လိုင်းပညာရေးဝန်ဆောင်မှု မှာပါသည့် အကြောင်းအရာများကို အခြား Social လူမှုကွန်ယက် တွေမှာ ပြန်လည်ကူး ယူဖော်ပြလို့ရနိုင်မလား ?
ဖြေ : တက်လမ်း အွန်လိုင်းပညာရေးဝန်ဆောင်မှု မှာပါသည့် အကြောင်းအရာများကို အခြား Social လူမှုကွန်ယက် တွေမှာ ပြန်လည်ကူး ယူဖော်ပြလို့ မရနိုင်ပါဘူး။
မေး : တက်လမ်း အွန်လိုင်းပညာရေးဝန်ဆောင်မှုကို ရယူတဲ့အတွက် ဘယ်လို အကျိုးကျေးဇူးတွေ ရရှိနိုင်မှာလဲ?
ဖြေ : တက်လမ်း အွန်လိုင်းပညာရေးဝန်ဆောင်မှုကို ရယူကာ ဘာသာရပ်သင်ခန်းစာတွေကို လေ့လာသင်ယူခြင်းအားဖြင့် ယနေ့မြန်မာလူငယ်တွေ အချိန်မရွေးနေရာမရွေး ပညာရပ်တစ်ခုခုကို စရိတ်စခ သက်သာစွာနဲ့ သင်ယူနိုင်ပြီးတော့ အင်တာနက် ဒေတာရှိနေရုံနဲ့ မိမိတို့ တိုးတက်ရာ ဘဝတက်လမ်းအတွက် လမ်းပြ ထောက်ပံ့ပေးသွားမယ့် အသိပညာ အတတ်ပညာတွေကို သင်ကြား တတ်မြောက်ကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။